फिल्म चल्दा यी ३ हिरोइनलाई के भयो त फाइदा ? « Mazzako Online
फिल्म चल्दा यी ३ हिरोइनलाई के भयो त फाइदा ?
यो बर्ष केही फिल्म चले । जसमा यस्ता ३ फिल्म पनि छन्, जसको व्यापारले अभिनेत्रीलाई खासै चर्चामा राखेन । फिल्म ‘लुटेरा’ चल्यो । तर, बक्स अफिसमा निरन्तर असफल फिल्म दिइरहेकी अभिनेत्री निशा अधिकारीलाई यसले फाइदा दिएन । फिल्मको सबै क्रेडिट अभिनेता निखिल उप्रेतीको भागमा गयो । निशाको हातमा फिल्म आएन । उनी अन्य अभिनेत्रीको फिल्मको प्रिमियरमा सहभागी भएरै चित्त वुझाइरहेकी छिन् ।
अर्को फिल्म चल्यो ‘परदेशी’ । तर, यो फिल्म चलेर अभिनेत्री रजनी केसीलाई केही फाइदा भएन । उनको न फिल्म नगरिमा कुनै हाइप थियो न यो फिल्म चलेर त्यो हाइप नै बन्यो । उनी अहिले ‘लालजोडी’ नामक फिल्ममा काम गरिरहेकी छिन् ।
अर्को फिल्म चल्यो ‘पशुपति प्रसाद’ । यो फिल्म चलेर फिल्मकी अभिनेत्री बर्षा सिवाकोटीलाई पनि कुनै फाइदा भएन । यो फिल्ममा उनी नभएर अर्की कुनै नयाँ अनुहार राखिएको भएपनि कुनै फरक पर्दैनथ्यो । किनकी, यो फिल्ममा उनको संझनलायक रोल नै छैन ।
यसरी हेर्दा, फिल्म चलेपनि कहिलेकाही कलाकारलाई खासै काम गर्दैन भन्ने यी ३ अभिनेत्री हेरेर पनि थाहा हुन्छ ।